Kolosiana 3 - Ny Baiboly
22Hianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy eo imasony ihany, toy ny mpila sitraka amin'olombelona, fa amim-pahatsoram-po sy amim-pahatahorana ny Tompo. 23Na inona na inona ataonareo, dia ataovy amin'ny fo tokoa, toy ny amin'ny Tompo, fa tsy amin'olombelona, 24satria fantatrareo fa ny Tompo no handraisanareo ny valiny, dia ny lova any an-danitra; koa manompoa ny Kristy Tompo hianareo. 25Sady izay manao ny tsy marina anie, ka handray araka ny tsy marina nataony e! fa tsy mba misy fizahan-tavan'olona. >